LookBookHQ: Njikọ Aka Ọdịnaya na Akpaaka Platform | Martech Zone
Tuesday, July 26, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ka anyị na-azụlite usoro dị iche iche maka ndị ahịa anyị, anyị na-arụ ọrụ oge niile na usoro nke ebumnuche. Anyị na-ebugharị ọtụtụ ọdịnaya sara mbara nke na ọnụ ụzọ ámá n'ime nkọwa ihe ọmụma zuru ezu nke na-abanye n'ime akwụkwọ ọcha ma ọ bụ ọmụmụ ihe. Maka onye ọbịa na-enyocha ihe ọzọ ha zụtara, ha nwere ekele maka nlebara anya site na sara mbara ruo warara n'egbughị oge ha.
Kedu ihe ma ọ bụrụ na enwere ike ịzụlite njem ọdịnaya ahụ, nkeonwe dabere na data ndị ọbịa, ma na-ebugharị site na mkpọsa ndị dị mkpa na ndị na-azụ ahịa? Cetera Financial, ụlọ ọrụ ndụmọdụ ndụmọdụ ụlọ ahịa na-ere ahịa, chọpụtara na ndị na-eduga ịhọrọ ịba ụba na ọdịnaya bụ 2.4X nwere ike ịbụ ndị a nabatara
Gụọ akwụkwọ akụkọ ahụ na-eme ka ndị na-azụ ahịa ngwa ngwa na-anabata ụlọ taa
Nke ahụ bụ ahụmịhe ahụ Akwụkwọ nyocha na-enye ọkaibe ọdịnaya ahịa.
LookBookHQ na - enyere gị aka ijide oge ndị a site na ịgbanwee site na mmemme, mmemme emere na ịme omume na ịchụpụ omume, azụmaahịa mgbe niile na - emetụta ndị ahịa gị mgbe ị nwetara ya.
Atụmatụ LookBookHQ gụnyere
Nlele Pyramid Ọdịnaya - Nye akụ ndị yiri ya nke ndị ọbịa nwere ike inyocha n ’ije onwe ha.
Ọdịnaya Grid View - Mepụta microsites na-etinye anya na ngwugwu metụtara ọdịnaya ọdịnaya ọnụ.
Ọdịnaya Nuture View - Maapụ njem ị chọrọ atụmanya iji oge nkwalite ọdịnaya, ụdị na ahụmịhe nkeonwe.
Nlele Ọdịnaya Ọdịnaya - Na-akwalite ọtụtụ ọdịnaya ọdịnaya nke ndị ọbịa nwere ike ịnyagharịa n'otu oge.
Mata Ihe Ndị Ga-eme n'Ọdịnihu - Hụ otu kọntaktị na-enweghị aha na ndị ama ama na-ejikọ ọdịnaya akụ.
Tụọ njikọ aka - Hụ kpomkwem akụ ole atụmanya soro na ogologo oge.
Mkpokọta njikọ aka - Nyochaa njikọ aka data iji ghọta ihe ọdịnaya na-arụ ọrụ.
Akara na Nkewa - De-debanye aha ndị ọbịa ama ama na ndepụta ọdịnaya dabere na akụkụ ha ma ọ bụ akara ha.
Ndota Ndu - Kpebie oge na ebe ịgbakwunye isi ntụgharị na ahụmịhe ọdịnaya.
Were Ule Ule nke LookBookHQ
Tags: cetera egoakpaaka ọdịnayanjikọ akanjem ọdịnayacontent Marketingakpaaka ahịa ọdịnayanjem ahia ọdịnayanchịkọta ọdịnayanjem ndị ahịanjikọ akalebanyensuso ọdịnaya